Y DZAKATEVEDZANA MOTORI - anoderedza, honye anodzora, honye gearboxes, mapuraneti magiya mabhokisi, anomhanyisa anoderedza, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
Y DZAKATEVEDZANA MOTORI
musha / motokari / Y DZAKATEVEDZANA MOTORI
Y akateedzana Motors Y akateedzana mota akadzika-magetsi matatu-chikamu asynchronous motors, ayo ari akakosha akateedzana echinangwa chikuru. Aya akateedzana mota anokwanisa kusangana nezvinodiwa zvegeneral chinangwa mota mukati uye mhiri kwemakungwa nefuremu kubva pa80 kusvika 315.Iyi mota dzakateedzana dzakagadzirwa zvinoenderana neyenyika yakabatana standard. Y akateedzana mota ane zvakanakira kugona kwakanyanya, kuchengetedza simba, kuita kwakanyanya mashandiro, kudedera kudiki, ruzha rwepasi, hupenyu hurefu hwebasa, kuvimbika kwakanyanya uye nyore kugadzirisa. Kuwedzera kukura uye iro giredhi remagetsi rinoenderana zvizere neIEC standard. Ivo vari mukirasi B kuputira, IP 44 degree rekudzivirira uye kutonhora maitiro eIC411. Iyo yakatemwa voltage uye frequency kuputira kweY dzakateedzana zvakateedzana 380v uye 50HZ. Y kubatanidza kunogamuchirwa kwemamota pazasi pe3kw (3kw inosanganisirwa) uye △ kubatana kunogamuchirwa kune avo vari pamusoro pe4kw (4kw inosanganisirwa). Y akateedzana mota anowanzo shandiswa mumishini michina pasina chero chakakosha chinodiwa.
Y DZAKANYANYA DZIDZO DZEMAHARA